Bathola igciwane elingahle linciphise ukushisa komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - Boran Kartal
Kubukeka sengathi ekugcineni kukhona ikhambi, ngaphandle kokuthi liyasebenza, elijabulisa ngempela. Imayelana ne- igciwane kusukela eku-odeni kweMethanosarcinales okutholwe yiqembu labacwaningi abavela eRadBoud University, eNetherlands, kanye naseMax Planck Institute for Marine Microbiology eBremen, Germany, abalungiselele ucwaningo olushicilelwe ku Iphephabhuku i-Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ukutholakala okuthakazelisa kakhulu okungamela, ngaphandle kokungabaza, ngaphambi nangemuva kokulwa nemiphumela engalethwa ukufudumala komhlaba.
Abacwaningi bebevele besola ukuthi kukhona igciwane elingadla, hhayi i-methane kuphela, kepha ne-ayoni, kodwa kuze kube manje bebengakayitholi. Ngenhlanhla, bathole i-arch ukuthi isebenzisa i-iron ukuguqula i-methane ibe yi-carbon dioxide. Ngokwenza kanjalo, kunciphisa inani lensimbi elitholakala kwamanye amabhaktheriya, ngaleyo ndlela kuqale ukuqhuma kwamandla okuthonya umjikelezo we-iron-methane nokukhishwa kwawo.
Futhi sengathi lokhu bekunganele, lezi archaea zingaguqula i-nitrate ibe yi-ammonium, okuwukudla kwama-anamnox bacteria, guqula i-ammonia ibe yi-nitrogen… Ngaphandle kokusebenzisa umoya-mpilo! Lokhu kusebenza ikakhulukazi ekwelashweni kwamanzi angcolile, njengoba kuvezwe nguBoran Kartal, ongungoti wezinto eziphilayo eMax Planck Institute, owangeze wathi:
I-bioreactor equkethe i-anaerobic methane ne-ammonium oxidizing microorganisms ingasetshenziswa ngasikhathi sinye ukuguqula i-ammonium, methane ne-nitrogen oxidized emanzini angcolile ibe yi-nitrogen gas ne-carbon dioxide, enamandla amancane kakhulu okushisa komhlaba.
I-Archaea ingaba wusizo kakhulu emanzini angcolile.
Yize babekwazi ukuba khona kwalezi zinhlayiyana ze-methane ezincike ensimbi, babengakwazanga ukuzihlukanisa. Kodwa-ke, bakwazile ukubathola eqoqweni labo lesampula, futhi manje bangasetshenziselwa ukunciphisa ukufudumala kwembulunga yonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ikhambi lokushisa komhlaba: igciwane elidla i-methane